Nidina any an-toerana kosa ireo polisy avy amin’ny Fip 25 hanatevina ireo namany. Afak’omaly dia vavolombelona enina no efa nohenoin’ilay vaomiera manokana najoro hanao famotorana ity raharaha ity, ka ahitana mpitsara roa, zandary telo ary polisy efatra.
“Hanatevin—daharana ireo namany aty an-toerana no anton-dian’ireo polisy ireo. Hanamafy ny fitandroana ny fandriam-pahalemana no ataon’izy ireo eto Toliara. Misy ny fihodinana ny tanàna atao na andro na alina. Tamin’ny alahady no nahatongavan’izy ireo”, hoy ny contrôleur général Rakotondratsima Désiré Johnson, Tale jeneralin’ny polisim-pirenena izay any Toliara mandray an-tanana ny fibaikoana mivantana ireo polisy.
Araka ny fanatatra dia efa hatramin’ny afak’omaly no amperinasa ny vaomiera manokana najoro hanao ny famotorana mikasika ny nahafaty ilay mpitsara Rehavana Michel.